Global Lives Project: Fandraisan-dahatsarin’ny fiainan’ny olona 10 mandritra ny 1 andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2008 20:37 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, 日本語, عربي, English
Natsangana hampisehoana fiainan'olona folo samihafa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny fanarahana azy ireo sy handraisandahatsary azy ireo mandritra ny 24 ora ny Global Lives Project. Miaraka alefa amin'ny fotoana mitovy anatina toerana voaorina iray ahafahan'ny tsirairay mivezivezy mitsidika efitra 10 samihafa handefasana ny lahatsarin'ny andavanandrom-piainan-dry zareo nofantenana tsirairay ny 240 ora voangona. Manaraka izany, ny famahavahany ny fenitra takariny, ny ataony hanatrarany izany fenitra izany sy fanazavana fanampiny momba ny tetikasa:
Ny tanjona kendrena dia ny hampivoitra ny fahasamihafana eto amin'ny pilaneta, ahafahana maneho amin'ny tsirairay ny fombam-piainan'ny hafa, tsy noforonina na namboamborina. Tsy hoe mandritra ny fampirantiana ihany no ahazoana mijery ireo fa mbola ampidiriana amin'ny tahalan-tserasera ihany koa izy ireo, ho karazana raki-pahalalan'ny traikefan'olombelona.
Eo ampikarohana mpaka lahatsary any Azia, Eoropa atsinanana ary Afrika indrindra ry zareo amin'izao fotoana izao, sy toeram-pampiratiana maro manana savaivo 20 metatra, mpandika teny ary mpanohana. Raha te-haka ny andinindininy ianao dia azonao jerena ao amin'ny vohikalany izany. (jereo ny lahatsoratra nadika). Efa naka sarina Amerikana mpanamory fiara mandeha amin'ny herinaratra tany San Francisco sy mpihira Breziliana sady mpanaramaso fahazoan-dalana hiditra an-tanàna ry zareo ary efa naka sary tany Malawi sy tany Japana koa.